Iingcebiso ezili-10 eziphezulu zokuSebenzisa iYouTube kuShishino oluNcinci-YTpals
Ngaba ulishishini elincinci elinomdla wokwenza usasazo olukhulu kuYouTube? Ewe, ufike kwindawo elungileyo. Kweli nqaku, siza kukusa kwezona ngcebiso zili-10 zibalaseleyo zeYouTube ngalinye ishishini elincinci ekufuneka lilandele, ukuba bafuna ukwenza umdlalo wabo wentengiso yevidiyo.
1. Bandakanya iiCTA zakho ekuqaleni kwevidiyo
Le yenye yeengcebiso ezilungileyo zikaYouTube esinokukunika zona.
Ayinguye wonke umrhumi weYouTube oya kubukela kude kube sekupheleni kwevidiyo yakho. Ukuqala kwevidiyo kulapho uya kugcina elona xesha liphezulu lokuhoya. Ke, ukuba neCTA ekuqaleni kwevidiyo yakho kunokuqinisekisa ukuba wonke umntu obukeleyo ufumana ulwazi lweshishini lakho.
2. Yiba nezitampu zexesha ukuze abantu bakhawuleze ukuya kumxholo abafuna ukuwubona
Masithi ividiyo yakho yeYouTube yinde. Ayinguye wonke umrhumi weYouTube oya kuba nomdla wokuhlala ngemizuzu engama-20, engama-30 okanye engama-40 yomxholo wakho. Ukubanika izitampu zexesha zamacandelo ahlukeneyo omxholo wakho kunokonyusa amathuba okubukela kwabo ubuncinci loo macandelo evidiyo abanomdla kuwo. Ukuba ufaka i-CTA kuwo onke amacandelo, uya kuba nakho ukukhuthaza umnikelo wakho nokuba ingakanani okanye incinci kangakanani na ividiyo ayibukeleyo.
3. Sebenzisa izihlokwana ukwenza umxholo wakho ufikeleleke ngakumbi
Enye yezona ngcebiso zibalulekileyo zikaYouTube kule minyaka yanamhlanje, kukuba usebenzisa imibhalo engezantsi ukwenza umxholo wakho ufikeleleke. Iimpawu ezininzi zilahlekelwa kwishishini ngokutyeshela imarike yabathengi abakhubazekileyo kunye neemfuno ezizodwa. Ukuphucula iinkcazo zevidiyo yakho kubafundi besikrini kunye nemibhalo engezantsi yababukeli abangeva kakuhle, kunokukunceda ukuba uzibandakanye neqela labathengi abangahoywanga.
4. Musa ukuncamathela kwiividiyo, yenza izithuba zasekuhlaleni zikaYouTube
Izithuba zoluntu yimifanekiso engatshintshiyo oyibona kuYouTube. Nangona ividiyo iyeyona fomati yomxholo wakho apha, enye yeengcebiso zethu eziphambili zeYouTube kukuba usebenzise izithuba zabahlali. Ezi zithuba zikunika amandla okuzibandakanya nababhalisile bakaYouTube abanokuthi bangahlali kwiividiyo zakho rhoqo. Awuzukubabeka bodwa kwaye unokubenza babuyele kwiakhawunti yakho yeYouTube rhoqo, nokuba abazibukeli iividiyo zakho ngalo lonke ixesha.
5. Hlela iividiyo zakho kuluhlu lokudlalwayo ukuze ukhangele lula
Ukuba ulishishini elincinci elineepotfoliyo ezahlukeneyo zeemveliso, cinga ukwahlula iividiyo zakho kuluhlu lokudlala olwahlukileyo. Ngaloo ndlela, ababhalisile bakho beYouTube akufuneki bahluze kwiividiyo ezininzi ukuze bafumane enye abafuna ukuyibukela. Bangakwazi ukuya ngqo kuluhlu lwabo lokudlala oluthandayo kwaye baqale ukubukela. Oku kulula ukuyisebenzisa kuya kukhuthaza abantu abaninzi ukuba bazibandakanye nawe.
6. I-SEO yongeza izihloko zevidiyo kunye neenkcazo
Le yenye yezona ngcebiso zibalulekileyo zikaYouTube esinokukunika zona. Embindini wayo, iYouTube yinjini yokukhangela-yeyesibini kuphela kuGoogle. Ukukhangela kuYouTube kuya kutsala iividiyo ngokusekwe kumagama angundoqo owasebenzisileyo kwisihloko sevidiyo yakho nakwinkcazo yakho. Ke, sebenzisa indibaniselwano yamagama angundoqo anomsila omfutshane kunye nomsila omde. Yongeza amakhonkco kwimithombo eyaziwayo enikezela ngolwazi, ngelixa ukwabonelela ngamakhonkco kwishishini lakho.
7. I-thumbnail elungileyo inokusebenza imimangaliso
I-thumbnail ngumfanekiso omncinci owubonayo ubonakala ecaleni kwesihloko sevidiyo, ngaphambi kokuba ucofe ividiyo ukuze uyidlale. Kuba umfanekiso unexabiso lamagama aliwaka, rhoqo i-thumbnail yeyona nto ivusa umdla wababukeli kwaye ibenze bacofe kwividiyo yakho. Ngoko khetha i-thumbnail yakho ngononophelo olukhulu.
8. Cinga ngokusebenzisana nezinye iibrendi ezincinci
Enye yeengcebiso eziphambili zikaYouTube ezidla ngokuchazwa ngabaphembeleli bakaYouTube, ngumxholo wokusebenzisana. Xa usebenza nelinye ishishini elincinci - ngakumbi elo lisebenza kwimarike encomekayo - unokufikelela kwiseti entsha yabathengi. Kwaye, kuba lo mxholo unenzuzo kuni nobabini, uya kuba nakho ukunyusa intengiso yolunye uhlobo kunye nokufikelela eluntwini ukuze ufumane igama malunga nebhrendi yakho. Iividiyo ezinjalo zikuvumela ukuba ubonise imveliso yakho esetyenziswayo. Umxholo wokubambisana unokwenziwa, uthi, inkampani yephepha kunye nomenzi wepeyinti.
9. Gcina ishedyuli yokuposa engatshintshiyo
Le yenye yezona ngcebiso zibalulekileyo zikaYouTube kwimpumelelo yakho kaYouTube. Kukho intuthuzelo ngokuhambelana. Ukwazi ukuba uya kuthumela ividiyo yakho ngosuku oluthile, ngexesha elithile, kunokukhuthaza ababhalisile bakho ukuba bandwendwele isitishi sakho yonke imihla/iveki/ngenyanga kumxholo omtsha. Xa uneshedyuli yokuthumela eshiyanayo, abalandeli bakho abayi kukwazi ukuba bangasindwendwela nini isitishi sakho kwiividiyo zakho ezintsha.
10. Buza ababhalisi bakho bakaYouTube ngeembono malunga nento abafuna ukuyibona
Okokugqibela, enye yeengcebiso ezilungileyo zikaYouTube esinokuzinika ukuba udibane nababukeli bakho ngemibono yevidiyo. Xa usenza njalo, ubenza bazive beyinxalenye yenkqubo yakho yokuyila kwaye oku kwenza ukuba bakuthande. Banokubukela ividiyo yakho ukuba baziva ngathi ngabo abathe banegalelo kumbono.
I-YouTube inokuba sisixhobo esinamandla kakhulu kwindawo yakho yokuthengisa. Ukuphucula umdlalo wakho ngakumbi, unako bathenge ababhalisile kwiYouTube ukusuka kwiYTpals. Rhoqo, uya kuqaphela ukuba ababukeli baya kubandakanyeka ngakumbi kwiividiyo zakho zeYouTube, ukuba babona abanye sele bekwenzile oko. Siyazi ukuba umxholo wakho uya kumangalisa. Yikhuthaze ngokuthenga abaBhali beYouTube abakumgangatho ophezulu kuthi namhlanje.
Iingcebiso ezili-10 eziphezulu zokuSebenzisa iYouTube kuShishino oluNcinci ngababhali beYTpals, 28 October 2021
Izimvo ezingaphantsi kwesibini kwimizuzwana ye-Youtube iividiyo eziya kwandisa ukubonwa
Iividiyo ezimfutshane bezinomsindo okoko i-TikTok yaqhushumbayo. Njengokuba i-Instagram ikhuphisana neTikTok malunga nento entsha eyenziwayo, ibilixesha kuphela ngaphambi kokuba iYouTube ize nezinto zayo…
Uyilo lweMpendulo yeBrand kwiCoronavirus Ngokusebenzisa iiVidiyo
Inoveli ye-COVID-19 ubhubhane kunye nomzi-mveliso wokukhangela Akukho mathandabuzo ukuba ishishini lokukhangela elinobunkunkqele lizibeka endaweni yalo njengelikwaziyo ukutshintsha kwaye libhetyebhetye. Nanini na xa uGoogle ekhupha iseti entsha ye-algorithms, imboni…